Okufanele ukwenze uma i-smartphone yami, i-iPhone noma i-Android yebiwa | Izindaba zamagajethi
Yini esingayenza uma i-smartphone yethu ye-Android noma ye-iOS yebiwe noma ilahlekile? Izinyathelo esincoma ukuthi uzilandele
Ukulahlekelwa noma ukubiwa kwe-smartphone yethu okuhlangenwe nakho okubi kakhulu okungabhekana nakho namuhla maqondana nabathengi be-elektroniki, hhayi nje kuphela ngezinto ezinhle ezibandakanya lokho (amanani aya ngokuya enyuka) kodwa futhi nokuzuzisa thina uqobo esinakho ngaphakathi.
Imihlahlandlela yokuvimbela lokhu ukuthi yenzeke ilula kepha ayisebenzi ngaso sonke isikhathi, ngoba ayinciki kuphela ekunakekelweni nasekinakekelweni esinakho. I-Google ne-Apple basinikeza amanye amathuluzi esingabuyisa ngawo idivayisi kepha uma kungenzeki okungenani singagcina yonke imininingwane yethu. Kusuka ezithombeni kuya kwimininingwane yomuntu efana nama-akhawunti asebhange, amakheli noma izinombolo zocingo.
1 Ingabe i-iPhone yakho yebiwe noma ilahlekile?
1.1 Sisebenzise [Ukucinga] ku-iPhone yethu
1.2 Asinayo [Ukucinga] kusebenze ku-iPhone yethu
2 I-smartphone yakho elahlekile noma eyebiwe yi-Android
Ingabe i-iPhone yakho yebiwe noma ilahlekile?
Uma ngabe idivayisi esilahlekile noma eyebiwe ivela kuhlobo lwe-apula, inqubo izokwehluka noma ngabe sisebenzise inketho ethi "Sesha" noma cha, ngoba le nketho incike ekutheni singakwazi yini ukusesha i-terminal ngokwethu futhi siyilawule kude kusuka kwenye idivayisi ye-apula, noma kusuka kuwebhusayithi uqobo.
Ukwenza kusebenze le nketho kulula, kufanele nje singene: izilungiselelo / amaphasiwedi nama-akhawunti / iCloud / Usesho.
Sisebenzise [Ukucinga] ku-iPhone yethu
Ungasebenzisa uhlelo lokusebenza lokusesha ukuzama ukubuyisa idivayisi yakho noma ukuthatha ezinye izinyathelo ukuvikela imininingwane yakho ngendlela elula.
Ngena ngemvume ku- iCloud.com kuwebhusayithi uqobo noma sebenzisa uhlelo lokusebenza lokusesha kwenye idivayisi ye-Apple.
Thola idivayisi yakho. Vula uhlelo lokusebenza lokusesha kudivayisi yakho ye-apula noma iya ku-ICloud.com bese uqhafaza usesho. Khetha idivayisi oyifunayo ukuze ubone indawo yayo kumephu. Uma ngabe idivayisi iseduze, ungayenza ikhiphe umsindo ukuze wena noma omunye umuntu uyithole.
Maka njengokulahlekile. Idivayisi izokhiywa ukude ngekhodi futhi ungabonisa umlayezo owenziwe waba ngowakho ngenombolo yakho yocingo ezovela esikrinini sokukhiya zedivayisi elahlekile noma eyebiwe. Indawo yedivayisi nayo izolandelwa. Uma une-Apple Pay enamakhadi esikweletu axhunyiwe, izovinjelwa lapho wenza kusebenze imodi elahlekile.
Bika ukulahleka noma ukwebiwa emahhovisi aseduzane nawePhoyisa noma amaCivil Guard. Bazokubuza ngenombolo ye-serial yesiginali okukhulunywa ngayo. Inombolo ye-serial ingatholakala kuphakheji yokuqala, i-invoyisi noma ku-iTunes uma uyixhumile.
Sula okuqukethwe kusuka kudivayisi. Ukuvimbela umuntu ukuthi afinyelele imininingwane yethu nganoma iyiphi indlela, singayisula kude. Lesi silinganiso sibi kakhulu njengoba konke sekususiwe, sisula ngokuphelele inkumbulo yesiginali yethu, siqeda wonke amakhadi noma ama-akhawunti axhunyiwe. Lapho ukusetshenziswa kokukhethwa kukho konke kusetshenzisiwe, idivayisi ngeke isatholakala Kokubili ekusetshenzisweni nakuwebhu ye-iCloud. Ukunakwa! Uma ngabe idivayisi isuswa ku-akhawunti yethu ngemuva kokusebenzisa okuqukethwe okususiwe, i-terminal block ngeke isasebenza, ngakho-ke noma ngubani omunye uzokwazi ukusebenzisa futhi asebenzise i-terminal.
Yazisa opharetha wakho wefoni ephathekayo ngesimo sakho ukuthatha izinyathelo ezifanele, ukuze vimbela ukusetshenziswa kocingo lwakho. Ungahlanganiswa umshuwalense othile opharetha wakho.
Uma unenkontileka ye-Apple + futhi imbozwe ngokweba noma ukulahleka, ungenza irekhodi lesimangalo sedivayisi.
Asinayo [Ukucinga] kusebenze ku-iPhone yethu
Uma ngeshwa singenayo le nketho eyenziwe yasebenza ku-iPhone yethu ngeke sikwazi ukuyithola, kodwa sinazo ezinye izindlela zokuvikela idatha yethu nolwazi.
Shintsha iphasiwedi ye-ID yakho ye-Apple. Ngokushintsha iphasiwedi uzovimbela umuntu ekufinyeleleni idatha yakho ICloud noma usebenzise ezinye zezinsizakalo zayo.
Shintsha amaphasiwedi owagcinile ku-akhawunti yakho ICloud, lokhu kungafaka ukufinyelela ezitolo eziku-inthanethi, ku-Facebook noma ku-twitter.
Bika emaphoyiseni noma emahhovisi oMnyango Wezokuvikela, uhlinzeke ngenombolo yocingo yedivayisi.
Yazisa opharetha wakho wezingcingo mobile ukuthatha izinyathelo ezifanele.
Uma uzibuza ukuthi ngabe lukhona yini uhlelo noma uhlelo lokuthola idivayisi ngaphandle kwe- [Sesha]. Ngeshwa akunjalo.
I-smartphone yakho elahlekile noma eyebiwe yi-Android
Uma i-terminal elahlekile noma eyebiwe inangaphakathi uhlelo lokusebenza lwe-Android, singakuthola sisebenzisa enye idivayisi exhunyiwe ukufinyelela lokhu ikheli lewebhu. Leli kheli lewebhu lihlotshaniswa ne-akhawunti yakho ye-google ngakho-ke kuzodingeka ukuthi ungene kulo. Inketho yokuthola idivayisi yethu ihlala isebenza ngokuzenzakalela ngakho-ke okungenzeka kakhulu ukuthi unayo.
Ukwenza kusebenze le nketho esigungwini sethu kulula njengokufinyelela izilungiselelo / i-Google / ezokuphepha / ukuthola idivayisi yami.
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho yakwa-Google kusuka kusiphequluli sewebhu kulokhu isiqondiso.
Sizothola imephu lapho singasesha khona indawo ngqo yedivayisi yethu ye-Android, ukuze lokhu kwenzeke i-terminal kufanele ixhunywe kwi-inthanethi, ibonakale ku-Google Play, ibe nayo indawo inikwe amandla futhi futhi Inikwe amandla inketho yokuthola idivayisi yami.
Thola idivayisi yakho. Uma sikholelwa ukuthi i-terminal kungenzeka isondele, singasebenzisa i-a inketho ebizwa ngokuthi «dlala umsindo» lokhu ukuze i-terminal iqale ukukhala imizuzu emihlanu ngevolumu ephelele noma ithule noma idlidliza.
Khiya idivayisi. Le nketho iyasivumela khiya i-terminal ngepini, iphethini noma iphasiwedi. Uma singenayo indlela yokuvimba eyakhiwe, singayakha ngalesi sikhathi ukude. Singabhala umyalezo ngenombolo yethu yocingo esikrinini sokukhiya, ukuze bakwazi ukusibuyisela kithi uma kwenzeka ilahlekile.
Susa idivayisi yethu. Le nketho yokugcina nenamandla kakhulu izosula yonke imininingwane yethu noma imininingwane ebucayi kusuka kudivayisi. Kusuka kumakhadi esikweletu axhunyaniswe namaphasiwedi okungenzeka ukuthi sigcinwe kusiphequluli noma kuzinhlelo zokusebenza.
Bika ukweba noma ukulahleka eziteshini zamaphoyisa eziseduze, ukwenza lula inombolo ye-serial.
Xhumana no-opharetha wakho weselula ku vimba ulayini wefoni.
Uma kwenzeka unganayo inketho yokuthola idivayisi yami esebenzayo, ngeke sikwazi ukuthola ukuphela, kepha uma sinezinye izinketho zokubavimbela ekufinyeleleni i-akhawunti yethu ye-google noma idatha ebucayi. Kufanele sishintshe iphasiwedi ye-akhawunti yethu yakwa-Google ngokushesha, futhi isincomo sami ukuthi lokhu kwenziwa ngakho konke esikubheka njengokubalulekile, ukuze kungathinti idatha yethu yobumfihlo neyezezimali.
Vele, ungakhohlwa ukubika ukweba noma ukulahleka futhi thinta opharetha wezingcingo ukugwema ukusetshenziswa komgunyathi komugqa wethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Yini esingayenza uma i-smartphone yethu ye-Android noma ye-iOS yebiwe noma ilahlekile? Izinyathelo esincoma ukuthi uzilandele
I-Huawei MediaPad M6: Ukubuyekezwa kwethebhulethi enokuningi ongakusho